Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii weynaa ee xalay garoonka Anfield ku dhexmaray Kooxaha Liverpool iyo Tottenham - Hilaac News
Home Sports Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii weynaa ee xalay garoonka Anfield ku dhexmaray...
Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii weynaa ee xalay garoonka Anfield ku dhexmaray Kooxaha Liverpool iyo Tottenham
(Liverpool) 28 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa guul soo laabasho ah garoonkeeda Anfield kaga gaartay Tottenham Hotspur.
Kulankan Spurs ayaa daqiiqadii ugu horreysay goolka koowaad ee ciyaarta la timid waxaana u dhaliyey Harry Kane, laakiin Liverpool ayaa ka soo laabatay waxaana goolka barbarbaha u dhaliyey Henderson 52’daqiiqo, halka goolka guusha uu rigoore ugu dhaliyey Mohamed Salah 75’daqiiqo.
Liverpool ayaa haatan hoggaanka horyaalka Premier League ku haysa lix dhibcood kaddib markii ay garaaceen Tottenham Hotspur oo daqiiqaddii ugu horreysay ciyaarta gool kaga naxsatay.
Haddaba halkaan hoose ka eeg rikooradii laga diiwaan geliyey kulankan:-
>- Liverpool ayaa guuldarro la’aan ah oo aan la garaacin 10-kii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, marka goolka koowaad looga dhaliyo garoonka Anfield, 7 kulan guul ayay gaartay hal 3 kulan oo kale ay barbaro gashay, waxaana ay wada guuleysatay lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo gool looga naxsaday horyaalka iyadoo ku ciyaareysa garoonkeeda.
>- Kooxda Tottenham ayaa fadhisa meel ka hooseysa 10-ka kaalin ee sarre horyaalka Premier League bisha November markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2014-kii.
>- Macallinka kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa xalay kooxda Spurs hoggaamiyey kulankiisii 200-aad ee horyaalka Premier League, kaliya 11 tababare oo kala duwan ayaa hal koox hoggaamiyey tiradaas taariikhda tartankan.
>- Liverpool ayaa haatan guuleysatay 12 kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League iyadoo ku ciyaareysa garoonkeeda Anfield, wax dhibic ahna ma lumin tan iyo bishii February.
>- Jordan Henderson ayaa goolkiisii ugu horreeyey Premier League ku dhaliyey garoonka Anfield tan iyo markii uu shabaqa ka soo taabtay West Brom bishii December sanadkii 2015-kii, waxaana uu goolkan sugayey 1414 maalood.
>- Harry Kane ayaa noqday ciyaaryahankii saddexaad ee mucaarad ah oo 60 ilbiriqsi gudahood gool ku dhaliya garoonka Anfield kulan horyaalka Premier League kaddib Matt Elliott oo Leicester ka tirsanaa oo sidaas oo kale sameeyey bishii August sanadkii 1997-kii iyo Olivier Dacourt oo Everton ah oo ku dhaliyey bishii April 1999-kii.
>- Harry Kane, Dele Alli, Son Heung-min iyo Christian Eriksen ayaa dhammaantood kulankan safka hore si wada jir ah ugu soo bilowday waa markii afaraad oo ay ku soo wada bilowdaan safka hore sanadkan 2019, markii ugu dambeysay oo ay sidaan oo kale safka hore ku soo wada bilowdaan waxa ay ahayd kulan ay 2-0 uga adkaadeen bishii April kooxda Crystal Palace.
Previous articleDonald Trump Jr. speaks out on Hunter Biden-Ukraine scandal
Next articleUK agrees to Brexit deal with EU
Cismaan Saleeban Diiriye(Cisman Laba Qori)Iyo wayhiisii kubda cagta
Mourinho, Wenger & Allegri oo hoggaaminaya macallimiinta qaban kara shaqada Bayern...
Man United oo ku dhawaaqday lambarrada ay xiran doonaan ciyaartoydeeda xilli...
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Faransiiska uga qayb gelaya kulan sannadeedka Madasha...
Athletic Bilbao oo guul dahabi ah kaga gaartay Barcelona kulankii furitaanka...
“Waxaan jeclaan lahaa inaan arko Neymar oo jooga Barcelona” – Suarez